काठमाडाैंमा अलपत्र परेका र हिँडेर गाउँ जान लागेकाहरूबारे प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
काठमाडाैंमा अलपत्र परेका र हिँडेर गाउँ जान लागेकाहरूबारे प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन, अब के हुन्छ ?
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिँडेर गाउँ जान नदिन र खान समस्यामा परेकालाई खानाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। लकडाउनको बेला मानिसहरू हिँडेरै आफ्नो गृह जिल्ला गइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफलमा समितिले हिँडेरै घर जानेबारे दुई विकल्प पेस गरेको थियो।
छलफलपश्चात सो निर्देशन दिएको बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले जानकारी दिए। यता सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन आदेश दिएको छ ।